Ambohiboromanga-Ambatondrazaka 4 mianaka indray novonoin’ny dahalo
Tsaratanana Mbola tsy hita ilay kandida natao takalon’aina
“Mbola tsy tafaverina ilay mpirotsaka ho fiadiana ho solombavambahoaka izay saika hiaraka amin’ny Fitondrana izay mijoro”.
Tetik’adin’ny jiolahy mpanafika Mpanampy vavy no atao mpitsikilo
Ny fampidirana mpiasa amin’ny trano hotafihina hitsikilo mba hahazoana ny vaovao indray izao no ketrik’ireo tambazotran’olondratsy.
Asan-jiolahy Dahalo 8 lahy nanolana mpianaka
Mirongatra ny asa fanafihan-dahalo ao anatin’ny kaominina Fieferana, distrikan’Antananarivo Avaradrano.
Tambazotrana mpivaro-jaza 5 mianadahy voasambotry ny Zandary
Fitiavam-bola diso tafahoatra ve sa efa endrika fahantrana, indrindra ara-moraly. Dimy miandahy ireo tra-tehaky ny zandary ka vehivavy avokoa ny 4 ary mbola mifikitra mitrotro zazakely menaky ny ainy ny iray izay tsy mieritreritra ny fangirifirin’ny zanaky ny hafa sy ireo nahitany masoandro nisara-mianakavy .
Olona miisa 4 no indray matin’ny dahalo tany amin’ny kaominina Ambohiboromanga any amin’ny distrikan’Ambatondrazaka ny talata teo tokony ho tamin’ny 8 ora alina.
Mpianakavy avokoa izy ireo ary tao anatin’ny fanafihana dia tokantrano 4 no nasesin’ireo jiolahy tao amin’ny fokontany nisy azy ireo tao amin’ny fokontanin’i Feramanga Atsimo. Ny lefitra faharoan’ny ben’ny tanànan’Ambohiboromanga sy ny rahalahiny ary ny ray aman-dreniny ireo namoy ny ainy ireo. Notifirina sy notetehina zava-maranitra iry voalohany. Nentina nivoaka ny tanàna kosa ny vadin’io tompon’andraikitra io sy ny anabaviny, ary novetavetain’ireo dahalo. Ny tena nampiahiahy dia tsy nitady vola na entana sarobidy izy ireo fa ny basy tao an-trano no re fa tena nokarohany mafy. Nilaza ho tsy mila ny omby sy ny vola ireo jiolahy. Nambarany kosa fa efa fifanarahana vita ny azy sy izay mety ho naniraka, raha ny fanazavan’ny lasibatra. Izany “operation tsy mitsitsy” izany no nambaran’ireo olon-dratsy fa tanterahiny.